Daawo Video: Maxaa dib loo helay oo ka cusub magaalada Muqdisho? - Caasimada Online
Home Warar Daawo Video: Maxaa dib loo helay oo ka cusub magaalada Muqdisho?
Daawo Video: Maxaa dib loo helay oo ka cusub magaalada Muqdisho?
Caasimada Online: Guud ahaan Wadanka Somalia ayaa tan iyo burburkii dowladii melateriga aheyd ee uu hogaaminayay alaha u naxariistee Mahamed Siyaad Barre kadib laga waayay nidaam dowladeed iyo Astaamihii Wadankeena uu caan ku ahaan jiray.
Magaalada Muqdisho waxaa haatan lagu arkayaa ama laga maqlayaa waxyaabo badan oo dib u soo noqonaya iyo arimo waa hore u dambeeyay oo dib loo arkaya ee nala daawo arintani waa hore u dambeeysay oo haatan dib loo helay.